समानान्तर Samanantar: July 2015
Posted by Govinda at 7/27/2015 10:43:00 AM No comments:
कुनै सिद्धान्तमा नभएर लेनदेनमा आधारित संविधानको राजनीतिक पक्षमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। परिमार्जन पनि लेनदेनकै आधारमा न हुने हो! नियत र निहितार्थ स्पष्ट नभएको अभ्यासमा संलग्न हुनु मूर्खता हो। यसैले यो नजन्मँदै बेवारिस संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिनुको अर्थ छैन। त्यसो त संविधान मस्यौदामै तुहिन पनि सक्छ।
लुकाउन खोजेपछि भाषा र शब्दमा अस्पष्टता र अशुद्धि हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। भाषालाई मानवीय मर्यादाका दृष्टिबाट हेर्ने अभ्यास नेपाली भाषाविद्हरूमा छैन। जनतालाई 'आम' भन्दा शासकलाई 'खास' बनाइएको हुन्छ भन्ने हेक्का भाषाविद्ले समेत राखेको देखिँदैन। राज्यले 'दिने' लेख्दा नागरिकलाई 'माग्ने' बनाइएको हुन्छ। अधिकार सबै नागरिकको हो र राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न पो दिएको हो भन्ने बुझ्ने वा बुझाउने प्रयास त भएको छैन भने अभ्यास कहिले हुने? सहमतिका नाममा भागबन्डाको शासन बेहोर्नुपर्ने अभिशापबाट मुक्त नहुँदासम्म लोकतन्त्रको उपहाससिवाय अरू केही हुनेछैन।
उदारवादले पुँजी वा समाजका तुलनामा व्यक्तिलाई महŒव दिन्छ। राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो भने व्यक्ति स्वयं आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ हुन्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, सीप वा आय आर्जन गर्ने अवसरजस्ता व्यक्ति अर्थात् जनमुखी प्रयासहरूमा राज्यले बढी जोड दिनुपर्छ र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उदारवादी नीति हो।
उदार पुँजीवादीहरू राज्यको हस्तक्षेपभन्दा स्वतन्त्र बजारको पक्षमा हुन्छन् भने उदारवादीहरू जनहितका आर्थिक र सामाजिक विषयमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक र उचित पनि हुन्छ भन्ने मान्छन्। सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ तर समाजवादीहरूजस्तो व्यक्तिलाई राज्यमै निर्भर बनाउने हदमा उनीहरू जाँदैनन्। व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन आवश्यक सबै सहयोग राज्यले दिनुपर्छ र व्यक्ति पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता यथार्थमै चरितार्थ गराउन व्यक्तिका अधिकारको राज्यले रक्षा गर्ने हो।
बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता भूगोल नभएर जनतामा आधारित हुन्छ भनेका थिए। यो उदारवादी चिन्तन हो। अहिले लिपुलेकमा भारत र चीनको हस्तक्षेपको चर्को विरोध भएको छ। कालापानी कुनै बेला कथित राष्ट्रवादको प्रतीक बनेको थियो। तर, लक्ष्मणपुर बाँधलगायत भारतले एकतर्फीरूपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएको संरचनाबाट नेपाली जनताले सहेको सास्ती र भोगेको खतीको खासै वास्ता गरिएको छैन। उदारवादले लिपुलेकभन्दा लक्ष्मणपुर बाँधले जनतालाई पारेको समस्याले भारतसँगको वार्तामा प्राथमिकता दिने थियो।
उदारवादीले भए बजेटमा आजीविकाको चिन्ता गर्थे। गाउँका युवालाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउँथे। सहरका ट्याक्सी र रिक्सा चालकलाई तिनका साधनकोे मालिक बनाउने योजना ल्याउँथे। सरकार जमानी बसेर ऋण दिने हो भने ड्राइभरले ट्याक्सी किन्न सक्छन्। सीप सिकाउने र बचत गर्ने बानी बसाउने हो भने गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नेछन्।
उदारवादीले योजना बनाएमा पुनःनिर्माणको केन्द्रमा जनतालाई राख्ने थिए। घर बनाउन सहयोग छिटो र सजिलो उपाय अपनाएर दिने थिए। व्यक्तिलाई यस्तो घर बनाउनुपर्छ र यति पैसा सरकारले दिन्छ भने निर्माण सामग्रीका लागि पैसा वा कुपन दिए उनीहरूले सजिलै बनाउनेछन्। पुनःस्थापनाका क्रममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विशेषगरी बालबालिका र युवालाई दरिद्रताको भुमरीबाट बाहिर निस्कन मद्दत गरियो भने तिनले शिक्षा र सीप सिक्ने अवसर पनि पाउँछन्। शिक्षा र सीप भए तिनले कमाउन सक्छन् र तिनको परिवार सुखी र सन्तुष्ट हुनसक्छ। एकपटक गरिबीको रेखाबाहिर निस्कन सके पछिल्लो पुस्ता सधैँका लागि विपन्नताको दुश्चक्रबाट उम्कन्छ। यसका लागि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। पुँजी वा समाजवादको केन्द्रमा व्यक्ति हुँदैन। अहिले पुँजीवाद अपनाएका पश्चिमी मुलुकमा उदारवादीले नै सामाजिक सुरक्षाको जग बसाएका हुन्। जापानको प्रगति उदारवादीकै अगुवाइमा भएको हो। यति सबै थाहा पाए पनि भागबन्डाका राजनीतिमा वाद वा सिद्धान्त गौणमात्र हैन महŒवहीन पनि हुन्छ।
अहिले नै सहर गाउँ दुवैतिर मानिसले आआफ्नै सुरमा मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माण थालिसके। सरकारले योजना बनाउँदा र निकासा दिँदासम्म त बहुसंख्यकले आआफ्नै सुरमा घर बनाइसक्छन्। अनि सरकारी योजना हावादारी हुनेछ। राज्य असफल हुने यस्तै सोच र शैलीले न हो। बजारमा पुगेको सिमकार्डको संख्यालाई मोबाइल प्रयोगकर्ता ठानेर विश्लेषण गर्ने र त्यही विश्लेषणको निष्कर्षअनुसार बनाइएको योजना र कार्यक्रम विफल हुँदा के आश्चर्य मान्नु?
सम्पदा पुनर्निर्माणमा दूरसञ्चार कर लगाइयो। धेरैले थोरैथोरै तिर्ने हुनाले यस्तो कर उठाउन सजिलो हुन्छ र चोरी भएन भने पैसा पनि धेरै नै उठ्छ। असंगठित जमातमाथि भार पर्ने हुनाले यस्तो कर तिर्नेले खासै विरोध पनि गर्दैनन्। तर, सहरमा केन्द्रित सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम उठाउन मोबाइलको सिग्नल फेला पार्न रुखमा चड्नुपर्नेहरूसँग कर लिनु न्याय भने होइन। उदारवादीहरू यस्तो करलाई उचित ठान्दैनन्। सम्पदाको पुनर्निर्माण हुनेबित्तिकै सहरी घरजग्गाको मूल्य बढ्छ। बिनाकुनै प्रयास तिनको सम्पत्तिको मूल्य करोडबाट अर्र्बमा पुग्छ। यसैले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेहरूसँग सम्पत्ति कर लिनु न्यायोचित हुन्थ्यो। यसै पनि पुनर्निर्माणका लागि धनीले धेरै र गरिबले थोरै तिर्नुपर्ने गरी करको दर समायोजन हुनुपर्थ्यो। तर भयो उल्टो।
धेरै सम्पत्ति हुनेले थप भार बेहोर्न नपर्ने अर्थात् पुँजी हुनेको हित गर्ने सिद्धान्त नै त पुँजीवाद हो। पुँजीवादमा पछिल्ला दिनमा अन्याय कम गर्न बजारमुखी अवधारणा अपनाइएको छ। प्रतिस्पर्धा निर्णायक हुँदा थोरै नै भए पनि जनताले लाभ पाउने अपेक्षाले बजारमुखी अर्थतन्त्रका आवरणमा पुँजीवादलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो।
परन्तु, नेपालको पुँजीवाद त बजारमुखी पनि हैन। स्वतन्त्र बजार र पुँजीपतिको हित बाझियो भने रामराम प्रवृत्तिले सधैँ पुँजीपतिको पक्ष लिने गरेको छ। भ्याट चोरहरूको सम्मान यसको अनौठो र नमीठो उदाहरण हो। बजारमुखी बन्न कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ। एकाधिकार त राज्यको समेत हुनुहुँदैन। यहाँ त सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ। नीति निर्माणमा विभिन्न नामधारी सिन्डिकेट सबैभन्दा बढी निर्णायक हुनेगरेको देखिएको छ। यस्तो व्यवस्थालाई चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) भन्न सकिएला। धर्मको विपरीतार्थक शब्द पाप मान्ने हो भने आफ्नै धर्मसमेत पालना नगर्ने पुँजीवादलाई प्रकृतिका आधारमा 'पापी पुँजीवाद' भने पनि हुन्छ।
अंकशास्त्री र अर्थशास्त्री
थोमस पिकेटी उदारवादी त हैनन्, तैपनि उनले अंक केलाएर निष्कर्षचाहिँ मानवीय पक्षकै आधारमा निकालेका छन्। 'वालस्ट्रिट कब्जा'का अभियन्तालाई वामपन्थी भनिए पनि तिनले मानवीय गरिबीकै समस्या उजागर गरेका थिए। जापानी अर्थतन्त्र पुँजीवादी नै हो, तर पौरख नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति तेस्रो पुस्ता पुग्दानपुग्दै सकिन्छ रे। पौरख गर्नेलाई कमाउन तगारो नलगाउने, राज्यले दिँदा आवश्यकताअनुसार सबैलाई दिने र लिँदा सक्नेसँग धेरै लिने नीति उदारवाद हो। यस्तै नीतिका कारण जापानमा धनी र गरिबबीचको अन्तर अरू विकसित मुलुकका तुलनामा निकै कम छ। सामाजिक सुरक्षामा त जापान यसै पनि उदाहरणीय नै छ। बजार अर्थतन्त्रमा राम्रै अभ्यस्त जापानका किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। उदारवादी अर्थशास्त्रीले बजेट बनाएका भए अधिकांश गरिब जनता आश्रित कृषिमा बजेटको २६ प्रतिशत र रक्षामा ३७ प्रतिशत विनियोजन गर्ने थिएनन्। त्यसमाथि, नेपाली किसानलाई राज्यले दिने अनुदान पनि सत्ताका दलालको हातमा पर्छ।
अंकशास्त्रीको जमातमा अर्थशास्त्री भन्न सुहाउने त बरु परिणाम हेरेर विश्लेषण गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डे देखिए। निर्वैयक्तिक कर्मचारीतन्त्रमा दीक्षित भए पनि उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट विकासका विसंगति केलाउने प्रयास गरेका छन्। डा. रामशरण महतदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका जनताका पक्षमा राजनीति गरेका हौँ भन्ने चलनचल्तीका अर्थशास्त्री भने अंकशास्त्रीभन्दा थप भएनन्। बाटो फराकिलो हुनेबित्तिकै ट्राफिक जाम कम हुन्छ भन्ने सोच यही अंकशास्त्रको प्रभाव त हो। काठमाडौँका फराकिला बाटामा अहिले जाम हुन सुरु भइसकेको छ। मोटर चलाउनेको हैन पैदल हिँड्नेको हितलाई प्राथमिकता दिने नीति भएको भए कम्तीमा लेन अनुशासन पालना हुन्थ्यो। सहरी क्षेत्रमा सकेसम्म निजी सवारी चलाउनै नपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरे सामान्य जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो। अनि, ट्याक्सी झिकाउनुको साटो बस चलाउन प्रोत्साहन दिइन्थ्यो।
विकासमा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेर पुँजीलाई प्रधान ठान्ने सोचलाई 'रामराम प्रवृत्ति' भने हुन्छ। यो प्रवृत्ति रामशरण महत र बाबुराम भट्टराई दुवैको साझा हो। यसैले दुवै रामको सम्मानमा यसलाई 'रामराम' प्रवृत्ति भनेको हो। अब यी दुई परस्परविरोधी राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायीले हुर्काएको प्रवृत्तिलाई अवैध सन्तान मान्ने हो भने 'हराम प्रवृत्ति' भने पनि हुन्छ।
बेलायतको ३० लाख पाउन्ड करिब ४५ करोड रुपियाँ नेपालमा आई नै नपुगेको हेलिकप्टरमा खर्च भएछ। त्यो बेलायतले नेपालको भूकम्पमा सहयोग गरेको शीर्षकमा राख्छ। वैदेशिक सहायताको हिसाब यस्तै हो। तर रामराम प्र्रवृत्तिको जग त यही हो।
सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताले आर्थिक वर्ष २०७२ /७३ को बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएको समाचार पढ्दा लागेको थियो– जनताका पक्षमा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम समावेश नभएकाले विरोध गरेका होलान्। हुनत, एमालेको खान्गीमा परेका मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको र एमालेको पनि भागबन्डा परेको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति भएका कार्यक्रम समावेश हुने हुनाले बजेटको विरोध गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित थिएन। तैपनि, जनहितकै विषयमा विरोध गरेका भए राम्रै हुन्थ्यो।
तर, एमालेको यत्रो चर्को विरोध त साना मान्छेको नाम पनि ठूला नेताको हारमा राखेकाले पो रहेछ! पञ्चायतकालमा राजाको नामलाई विशेष देखाउन वाक्य मिले पनि नमिले पनि पहिले राजपरिवारका सदस्यको नाम लेख्ने चलन थियो। अहिले पनि 'साना मान्छे'को नामसँग 'ठूला मान्छे'को नाम बजेटमा उल्लेख गरियो भनेर एमालेका नेताले बजेटै पारित नगर्ने धम्की दिएका रहेछन्। अर्थात्, 'मोर इक्वेल' नयाँ शासकहरूको मानसिकता पनि उत्तिकै सामन्ती रहेछ।
बजारमा वस्तु सस्तो र महँगो हुन्छ। व्यक्तिलाई पनि बजारले सस्तो र महँगो बनाउँछ। उदारवादले मात्र व्यक्तिलाई विशेष र मामुली ठान्दैन।
Posted by Govinda at 7/20/2015 09:46:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 7/19/2015 09:30:00 PM 1 comment:
भुइँचालोले क्षति पुगेका आँबुखैरेनीका गाउँहरूमा पौवा पनि पर्छ ।
भुइँचालोले घर भत्काएपछि कतिपय परिवार यो पालमा बस्दै अाएका थिए ।
ढिलै भए पनि पौवालीहरूलाई प्रतिपरिवार डेढ बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउन सकियो । सहयोग उपलब्ध गराउने IWEN, Canada र क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल तथा वितरण गर्न सहयोग गर्ने गाविस सचिव दुर्गा थापा, राजकुमार श्रेष्ठ, गिरबहादुर थापा, दीपक श्रेष्ठ र रमण गुरुङलाई हार्दिक धन्यवाद ।
Posted by Govinda at 7/15/2015 08:12:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 7/13/2015 11:55:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 7/12/2015 09:16:00 PM No comments:
सहमतिका सामु विधि र प्रक्रियामात्र हैन सिद्धान्त, मूल्य एवं मान्यतालाई समेत गौण बनाउने र उपेक्षा गर्ने अभ्यासले देशलाई कुन खाडलमा धकेल्ने हो अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन। यतिचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ– यो अभ्यास गलत हो।
गलतलाई नै सही ठान्ने प्रवृत्ति मूल चरित्र बनेपछि व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि हित हुँदैन। सम्भवतः हामी नेपालीले अझै ठूलो राजनीतिक विध्वंशको साक्षी बस्न बाँकी छ र त्यसको भयावह परिणाम भोग्न पनि बाँकी नै छ। संविधान जारी गर्न देखाइएको हतार र त्यस क्रममा मिचिएका मूल्यमान्यता कतै यदुवंशको विनाशको कथा बन्ने पो हो कि? नेपाली जनता आजित भएर दुर्वासा अवतारमा प्रकट भए भने 'सहमतिको संविधान' साम्बको पेटबाट निस्केको मुसलमा परिणत हुनसक्छ!
संविधान सभामा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदा केही सभासद् र तिनका दलले च्यातेे। मस्यौदामा छलफल गरेर विरोध गर्नुभन्दा च्यातेर सडकमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास पटक्कै हैन। संविधान सभामा आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर नपाउनेहरू सडकमा जानु अस्वाभाविक पनि होइन परन्तु, जननिर्वाचित वैध मञ्च छाडेर सडक उपद्रोको बाटो लिनेहरूले आफ्नो सहमति भएन भन्ने नैतिक अधिकार भने गुमाए। यसरी मस्यौदा नै च्यात्नेहरूले संविधानको त सधैँ विरोधै गरिरहने भए। लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मूल्यमान्यता मिचेर सहमतिको संविधान पारित गर्नेहरू कसैले पनि यसको स्वामित्व लिने भएनन्। सोह्र बुँदेका हस्ताक्षरकर्तामध्ये मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को अर्थ 'थान गन्ती'भन्दा सायद खासै बढी छैन। सहमतिका 'महानायक' एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरुमै लोकतन्त्रका केही आधारभूत विषयमा असहमति जनाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस यस प्रकरणमा निमित्त नायक हो। संविधान सभामा एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य भएकाले संविधान पारित गर्न कांग्रेसलाई साक्षी नराखी हुँदैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कारमाथि प्रहार गर्न कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई शिखण्डी बनाएका हुन्। संसदीय प्रणालीलगायत लोकतान्त्रिक आदर्शमै सम्झौता गरिएको संविधानलाई 'तर्बुजा कांग्रेस'हरूले आफ्नो ठाने पनि 'बहुलवाद', 'संसदीय पद्धति'जस्ता शब्दसम्म नअटाउने लिखतलाई कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता–कार्यकर्ताले पक्कै आफ्नो ठान्ने छैनन्। अर्को हस्ताक्षरकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को धेरै चर्चा गरिराख्नै पर्दैन। संविधान च्याते सत्तामा पुगिन्छ भन्ने लाग्यो भने एमालेका नेताहरूले यो संविधान त के आफ्नै विधान पनि कुनै बेला च्यातिदिन र त्यसलाई 'गतिशीलता' भनिदिन सक्छन्! यसैले अहिलेकै योजनाअनुसार हतारहतार लटरपटर गरेर संविधान जारी भयो भने त्यो लिखत बेवारिस हुनेछ।
कसैले पनि पूर्ण आत्मसात् नगरेको र केहीले स्पष्ट विरोध गरेको सिद्धान्तहीन सम्झौतामा आधारित संविधान जारी हुँदैमा संक्रमण अन्त्य हुने ठान्नु ठूलो भुल हुनेछ। यसको स्वामित्व कसैले लिनेछैन भने राजनीतिक संरक्षण पनि कसैले गर्ने छैन। संविधानको विरोध गर्नेहरूसँग मौकाअनुसार सबै मिल्नेछन्। कथित सहमति र सहकार्यको बाटामा सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेर थालिएको यात्राले पुर्याछउने अराजकतामै हो। अधिनायकवादका पुजारीलाई यस्तो अधोपतनको अराजक यात्रा सहज लाग्न सक्छ तर लोकतन्त्र बलियो हुने छैन। संक्रमण जति लम्मिन्छ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता उति नै कमजोर हुन्छ। बेलैमा उपचार नभए संक्रमणबाट जोगाउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल थप राजनीतिक संक्रमण थेग्नसक्ने अवस्थामा छैन। दुर्भाग्य, सत्ताका पुजारीहरूले देशलाई संक्रमणको भुमरीमा धकेल्दै लगेका छन्। अचम्मसँग नेपाली जनता तमासा हेरेर बसेका छन्।
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विद्यमान संविधान उल्लंघन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको दिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पालन गर्ने आदेशलाई एमाले वा माओवादी नेताले अवज्ञा गर्नु आश्चर्यको विषय होइन। उनीहरूको दीक्षा नै आफ्नो स्वार्थविपरीतका सबै विषयलाई सन्देहका दृष्टिले हेर्ने र षड्यन्त्र ठान्ने हो। तर्बुजा कांग्रेसहरूले पनि न्यायपालिकालाई गैरन्यायिक मञ्चबाट चुनौती दिन अप्ठेरो मानेनन्! तर, अन्तरिम संविधान पालना गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको नैतिक र कानुनी हैसियत ठालुहरूको सहमतिभन्दा बढी नै हुन्छ। राजनीतिक दलका ठालुहरूबीचमा कथित सहमति भए संविधान मिचे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु र पाटनका ६ प्रधान मिलेर 'राजा' फेर्ने खेल खेल्नुमा तात्विक अन्तर छैन। पार्टीका नेताले संविधानको 'मार्गदर्शक' बनाएको सोह्र बुँदे सहमतिलाई आआफ्नै दलहरूबाट समेत अनुमोदन गराएनन्। यसभन्दा बढी अधिनायकवादी चरित्र अरू के हुनसक्छ? जनताले अनुमोदन गरेको चुनाव घोषणापत्रको सम्मानको त कुरै भएन। सोह्र बुँदे सहमतिको जुम्ल्याहा भएर जन्मने संविधान गर्भमै अवैध बन्यो।
सहमतिको आधार : लोकतन्त्र
नेताहरूलाई पाटने प्रधान हुने मन थिएन भने तिनले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया स्वीकार गर्नेमात्रै सहमति गरे पुुग्थ्यो। सर्वहाराको अधिनायकत्वमा मात्र जनताको हित हुन्छ भन्ने दीक्षा पाएका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको सर्वोच्चता स्वीकार गराउन सकेको भए नेपाली कांग्रेसको जित हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले पनि हार्ने थिएनन्। जनताले दिएको हैसियतअनुसारको भूमिका पनि हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात नगरी लिइएको कुनै पनि निर्णय दिगो हुनै सत्तै्कन र यो बेइमानी तथा स्वार्थका जगमा बनेको कथित सहमतिको संविधान पनि हुने छैन। न्यायिक दृष्टिबाट अवैध र सैद्धान्तिक दृष्टिबाट अपवित्र यो लिखत सत्ता स्वार्थका लागि एकत्रित केही लाउकेहरूको निर्णयकै भरमा स्वीकार गर्न नेपाली जनता नैतिकरूपमा पनि बाध्य छैनन्। तर, जनताले चुनेका सभासद्ले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्र्णय गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार मत विभाजन गरी संविधान निर्माण गरे भने त्यसलाई चाहिँ जनताले चुनेकै प्रतिनिधिबाहेक अरूले चुनौती दिने नैतिक अधिकार हुने छैन। निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताबाहेक अरूलाई छैन। जनताका प्रतिनिधिले गरेको निर्णय मान्न नसक्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर विवादहरू टुंग्याएको भए हुन्थ्यो। नियमावली निलम्बन गरेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर पारित गरिएको संविधानविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार सधैँका लागि सुरक्षित हुन्छ। मधेसी दल, राप्रपा र जनजाति पार्टीहरूले विरोध गर्दा उत्तर दिने नैतिक अधिकार सत्ता गठबन्धनले गुमाएको छ। कांग्रेसका लागि यो संविधान र सहमति अन्ततः 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानै भयो' हुने निश्चित छ। संविधान बनेको अर्को महिना कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनेछ र त्यसपछि भागबन्डा गरिने सबै पद एमाले र माओवादीले लिनेछन्। मधेसीलाई बिलो दिनेछन्। सत्ताका लागि सिद्धान्त छाड्ने कांग्रेसहरूलाई यति सजाय त सुहाउँछ नि!
विपत्तिमा परेकाहरूको कष्टका बारेमा लेख्नुको पनि सायद कुनै अर्थ छैन। किनभने पैसा र प्रविधि भए पुग्छ मानवीय मूल्य गौण हो भन्ने ठान्नेहरू सत्तामा छन्। मानवीय मूल्यसँगै शासकीय नैतिकतालाई पनि महत्त्व नदिएपछि विपत्तिसमेत सत्ताको स्वाद लिने अवसर हुँदो रहेछ। आदर्शको साटो लोभबाट प्रेरित भएपछि राजनीति कमाउ पेसाबाहेक अरू हुनसत्तै्कन। अहिले विपत्तिको कालोबजार गर्नमै व्यस्त देखिए सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलहरू! बिचरा व्यापारीले जस्ता वा चामलको कालोबजारी गरे तर ठालुहरू त सिंगै विपत्तिकै कालोबजार गर्न तम्से। सरकार नालायकी लुकाउन 'नियमन'को आड लिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी राष्ट्रसंघीय निकायहरू आफ्ना हेलचेक्य्राइँ ढाकछोप गर्न नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट र जुम्सो कार्यशैली तथा सञ्चार माध्यमको 'पिपली लाइव' शैलीप्रति औँला ठड्याउन थालेका छन्! कूटनीतिक मर्यादा त नेपालमा जसले जति मिचे पनि हुन्छ। सबैको चेपुवामा पर्ने त भूकम्पबाट उठीबास लागेकाहरू न हुन्!
गल्ती नसच्याउने हठ
असार मसान्तसम्म अस्थायी टहराका लागि सहयोग पुर्या उन सरकार विफल भयो। यसो हुनु नै थियो। सरकारले बनाएको कार्यविधि र संयन्त्र दुवै काम लाग्दा थिएनन्। सहायता वितरणलाई कारिन्दाहरूले कस्न र कार्यकर्ताले फुकाउन खोज्दाखोज्दै समय खेर गयो। यसले पीडितहरू निराश भएका छन् भने राज्यप्रति तिनको विश्वास झन् कमजोर भएको छ। अस्थायी टहरा बनाउन त बेलामा सहयोग नगर्ने सरकारले स्थायी घर बनाइदेला भनेर पत्याउने पो कसरी? अधिकांश पीडित अस्थायी आश्रयको व्यवस्था आफै मिलाउन जुटिसकेका छन्। स्थायी घरको व्यवस्था गर्न पनि सक्नेबित्तिकै उनीहरू तम्सिहाल्नेछन्। त्यसरी बन्ने बस्ती व्यवस्थित र सुरक्षित नहुनसक्छ, तर उनीहरूलाई अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्ती बसाउन रोक्ने नैतिक शक्ति सरकारसँग छैन। अस्थायी टहरा बनाउनसमेत बेलामा सहयोग नगर्नेले कुन नैतिकताका आधारमा रोक्ने?
कार्यविधि र संयन्त्र दुवै विफल भइसकेपछि पनि त्यसलाई सच्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन। यही शैली अपनाइरहने हो भने जस्तोसुकै संयन्त्र बनाए पनि पुनर्निर्माण सफल हुने छैन। कुनै संयन्त्र वा प्रक्रिया विफल हुनु नै अपराध हैन, तर विफल भएको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन र स्वीकार गर्न तयार नहुने प्रवृत्ति भने डरलाग्दो हो। सरकारले यही हठ पटकपटक गरेको छ।
सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण
मध्य र सुदूरपश्चिमका थारूहरूमा सिकलसेल एनिमिया पाइएको समाचारले ध्यान तानेको थियो। नागरिकमा पटकपटक त्यसबारे प्रश्न पनि उठाएको थिएँ। (बजेटमा थारूरोग )। गएको वर्षै सरकारले सिकलसेलको परीक्षणका लागि केही रकम विनियोजन पनि गरेको थियो। सरकारी पैसा के भयो थाहा भएन, तर दाङको गंगापरस्पुर गाउँ विकास समितिका थारू जनसंख्यामा सिकलसेलको परीक्षण गर्ने योजना भने सफल भयो। त्यस गाविसका करिब ११ हजार जनतामा आधाजति थारू रहेछन्। तिनमा पनि ४० वर्षमाथिकाको परीक्षण गरिएन। केही कामको खोजीमा गाउँबाहिर गएका रहेछन्। यही असार ११ गतेबाट थालिएको सिकलसेल जाँचमा १९ गतेसम्ममा २ हजार ८ सय ९९ जनाले रगत जाँच गराए। तिनमा २७० जनामा सिकलसेल रहेको पाइयो। परीक्षणमा सँगै रहेका डाक्टरका अनुसार कसैमा पनि सिकलसेलले रोगकै रूप लिएको लक्षण पाइएन। यो निकै खुसीको विषय हो। तैपनि ९.३ प्रतिशतमा सिकलसेल पाइनु सामान्य अवस्था भने होइन।
शरीरमा सिकलसेल देखिँदैमा आत्तिइहाल्नु पर्नेचाहिँ रहेनछ। सिकलसेल रोगमै बदलिने जोखिम निकै कम हुन्छ रे! बरु औलो प्रतिरोधकको काम गर्ने रहेछ यसले। पति पत्नीमध्ये एकजनामा सिकलसेल नभए सन्तानलाई सर्ने जोखिम पनि निकै कम हुनेरहेछ। यसैले बेलैमा विशेषगरी विद्यालय जाने उमेरका सबैको जाँच गर्न सके विवाह गर्दा सकेसम्म जोखिमरहित जोडी बनाउन सल्लाह दिन सकिने थियो। यसको प्रचारप्रसारलाई अभियानकै रूपमा चलाउन सके हुन्थ्यो। पहिलो चरणको जाँच खासै महँगो पनि हुने रहेनछ। सरकारले तेस्रो चरणमा पुगेपछि उपचार गर्न रकम विनियोजन गर्नुभन्दा थारूमात्र हैन सबै आदिवासी जनताको सामान्य रक्त परीक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाए बेस हुन्थ्यो। सिकलसेलको ...उपचार'का लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भनेर रकमान्तर गर्ने वा अर्को वर्ष बजेटै नराख्ने त नहोस् नि!
Posted by Govinda at 7/06/2015 06:36:00 PM No comments: